PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - UKUBA NGUMUNTU WABANTU
UKUBA NGUMUNTU WABANTU
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Imibono - UBUDLELWANO NABANTU UKUZIPHATHA KWASEMSEBENZINI (PROFESSIONALISM) UKWETHEMBEKA
Inselele yokuqala okuvamise ukuba umuntu owenyukelwa wudumo abhekane nayo kuvamise ukuba kube wukuncipha kwesikhathi sakhe nomndeni, ngakho belu ukwaziwa nokuthandwa, ukuhlonishwa kumbe ukudingwa ngabantu.
Uma uyikhansela kumele ukulindele ukuvuswa yinoma ngasikhathi sini - ikakhulukazi uma sekuvele isimo esiphuthumayo noma udaba lwentuthuko yomphakathi.
Kanjalo noma ungungqongqoshe kuhulumeni ubhekana nemisebenzi eminingi, uhambele izindawo ezahlukene, ngisho namazwe amaningi angaphandle.
Nakosaziwayo abangabaculi kuba njalo, bachitha isikhathi esiningi behla benyuka, beyonandisa ezindaweni ababizwe kuzo. Uma ungumuntu oyisichizi kanti unesipho esithile abantu abakuthandela sona, lokho kungenza lusheshe ukuba duma lolo dumo, kokunye kulimale ngisho nenzuzo oyithola ngesipho leso.
Lokhu sikubona kaningi kubaculi abathandwayo, okuthi kade kulula besakhula ngodumo, kuthi bangafika esiqongweni sodumo bagcine sebenza sengathi abasabazi abantu phambilini akade bebabingelela kumbe bebaphendula ocingweni.
Yingakho uthola osaziwayo beba nezimenenja kumbe nabantu abazobeluleka ngendlela ethile. Uhlobo lomsebenzi owenzayo kuvamise ukuba lube nemithetho yokuziphatha kwabantu abenza lolo hlobo lomsebenzi.
Kungaba wukugcina isifuba ngemininingwane ephakathi kwesiguli nodokotela, ukunakekelwa kweziguli okulindeleke kubahlengikazi, ukusiza umphakathi osuke ufike emahhovisi ukuzofuna usizo olunhlobonhlobo, wukubachithela isikhathi benganakiwe, yimikhuba yokugwazisa exhantela lapho - nokunye njalonjalo.
Sithini ngothisha abaqomisa izingane zesikole kodwa umthetho wezemfundo usho ukuthi basendaweni yokuba ngabazali kubafundi babo?
Abanye baze babonise labo bafundi abathandana nabo imibuzo yezivivinyo lungakafiki usuku lwezivivinyo lezo.
Likuphi ikusasa lempilo yomfundi othatha izindlela ezinqamulelayo kanje? Uphi unembeza kulowo thisha?
Yinto efanayo nakonolwazi lomthetho - kuyena kulindeleke ukuba aziphathe ngendlela eyisibonelo esihle ngokugcinwa komthethho.
Yingakho nje ukushayela udle amanzi amponjwana kwaba yindaba enkulu kwelinye lamajaji akuleli zwe unkola Motata. Kosombusazwe lokhu yinto ebaluleke kangangokuthi isikhundla singakuphelela ngisho ungabulele muntu.
Lapha phela usuke usesikhundleni sokwethenjwa wumphakathi osuke uwumele - yikho bebizwa ngokuthi bangama-public representatives.
Yingakho njena kusayinwa nezincwadi ezihambisana nokuthi bayawazi umqulu ophethe imithetho yokuziphatha (code of ethics).
Kolowo ophazamile, mhlawumbe waqamba amanga efungile, kusuke sekulindeleke ukuba aziyekele yena emsebenzini hhayi ukuba aze akhishwe ngebhaxa.
Empeleni ngisho angadla imihlathi azibe, umphakathi usuke uzoqhubeka nokuhhomuzela uthi omphethe makamxoshe.
Lokhu siyakubona kwenzeka kulezi zinsuku njengoba kugingqika amakhanda kubaholi bezombusazwe, kokunye ngezenzo omunye ongekho kuleso sikhundla obengeke mhlawumbe ajeze kangako.
Nakuba kuvamisile kwamanye amazwe asethuthukile ukuba abaholi abaphazamile, uma kukhonaa ukungaziphathi kahle okuthile abakwenzile, bazehlele ezikhundleni kodwa iningizimu Afrika ibonakala ingelinye lamazwe anabaholi abehlulekayo ukwamukela amaphutha abawenzile, okuthi noma sekusuke umsindo kunezikhalo ngabo emphakathini kodwa baqhubeke bagweve ezikhundleni abasuke bekuzo.
Yingakho eshayelwe ihlombe umnu Nhlanhla Nene obengungqongqoshe wezemali kuleli lizwe, okuthe uma kuvela ukuthi uke wabonana nomndeni wezimanga wakwagupta osolwa ngokubhozomela umbuso, wanquma ukuba azehlele esikhundleni sokuba ngungqongqoshe, waphinde wesula ephalamende njengoba ubeyilungu LE-ANC khona.
KULELI sonto ungqongqoshe wezasekhaya umnu Malusi Gigaba ube sematheni kuleli sonto ngezigigaba ezahlukene ezithinta ukuziphatha kwakhe.